Coherent Video Systems သည် SMPTE ၂၀၁၅ တွင် 4K FMC Development Module အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ NAB သတင်းများ | 2015 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE4မှာဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုစနစ်များစျေးသစ် 2015K FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module: Commoditizing ဗီဒီယို-ကျော်-IP ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
VIDIO FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module
ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုစနစ်များ အယ်လ်ဒိုရာဒိုကုန်း, CA ၏၎င်း၏အသစ်အများ၏စွမ်းရည်များသရုပ်ပြ VIDIO FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module ဒီနှစ်မှာ SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲ။ ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယို 4k နှင့်ဗီဒီယို-over-IP ကိုမှအကူးအပြောင်းဖြေလျှော့ဖို့ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူထုတ်လွှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖြေရှင်းချက်နဲ့ Intellectual Property (IP) cores ပေးအထူးပြု။
ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုစနစ်များ VIDIO FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module
အဆိုပါဆန်းသစ်သောအစွမ်းထက်နှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပလက်ဖောင်း (VIDIO FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module) video signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ် Texas Instruments SDI ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုသည်။ VIDIO ကို select လုပ်ပါ Xilinx Ultrascale, Kintex, Virtex နှင့် Zynq ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပျဉ်ပြားပေါ်တွင် 12Kp4 မှတက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထောက်ပံ့ 60G SDI နှင့် IP interfaces ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ VIDIO module တစ်ခု 270k မှ SD ကမှဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေ supporting, SDI ငါ / Gb / s ကို 12 မှ4Mb / s မှမဆိုကြိမ်နှုန်းအိုနိုင်စွမ်းပါရှိပါတယ်။ ပြင်ပရည်ညွှန်း input ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာထောက်ပံ့သည်။ ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုမှ unique, အ VIDIO full-size BNC connectors ကိုအသုံးပြုသည်နှင့် 1rd ပါတီ SFP + module တွေကနေတဆင့်ဖိုင်ဘာကျော် 10G / 12G Ethernet (အိုင်ပီ) သို့မဟုတ် 3G SDI နိုင်စွမ်းတစ်ခု SFP + လှောင်အိမ်ထောက်ခံပါတယ်။
$ 495 ၎င်း၏တတ်နိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု module ကိုအသစ်သောထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရာတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးရှိစွာနှင့်စွယ်စုံပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ 12G circuit ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးကအရမ်းစိတ်ညစ်စရာဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုလည်းသိထား, အပြင်အဆင်, Gerber ဖိုင်များနှင့်ကလွယ်ကူထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့စမ်းသပ်နှင့် IP ထုတ်ကုန်ကျော် 12G နှင့်ဗီဒီယိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတှကျအောင်ဥပမာတစ်ခု FPGA သည်စီမံကိန်းအပါအဝင်အပြည့်အဝကိုကိုးကားဒီဇိုင်းကိုပေးပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်းများအပြင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုလည်း fixed function ကိုတစ်ဦးသည် Programmable Processor ကိုအမာခံအပေါ် running နှစ်ဦးစလုံးအတွက်, စတာတွေက de-interlacing, ချုံ့ချဲ့, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, image ကိုတိုးမြှင့်, frame rate ကိုပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် FPGA သည် IP-cores ပေးထားပါတယ်။
12G 2015 4K ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း SDI UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် IP ကိုကျော်ကဗီဒီယို Warsaw ကို 2015-10-28
ယခင်: FEMA Lab ကြိုတင်သတိပေးမှုနှင့် RESPONSE ကွန်ယက်အပြီးအပိုင်စမ်းသပ်ရန်အစီအစဉ်စတင်ခဲ့သော
နောက်တစ်ခု: intoPIX အဆိုပါ SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာ TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression ကို အသုံးပြု. UHDTV Hybrid ကို SDI / IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါတင်ဆက်ပေးတယ်